February 11, 2020 - CeleLove
်လူတစ်ယောက်ဟာ ကံညံ့တော့မယ်ဆိုရင် ဒီလို သိရပါတယ်
February 11, 2020 CeleLove 0
လူတစ်ယောက်ဟာ ကံညံ့တော့မယ်ဆိုရင် ဒီလို သိရပါတယ် လူတစ်ယောက်ဟာ ကံညံ့တော့မယ်ဆိုရင် (၁) အရင်ကထက်ပိုပြီး ဒေါသ၊ လောဘ၊ မောဟပိုကြီးလာ တတ်တယ်ပါတယ် ။ အရင်ကထက် ထစ်ခနဲရှိစိတ်တိုနေပြီဆို သတိထားဗျ။ ကံညံ့တော့မယ်လို့ ပြတာပဲ …။ (၂) မကောင်းတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ကောင်းတယ်လို့ မြင်လာ တတ်တယ်။ ဥပမာဗျာ […]
ချစ်သူ၊ဇနီးမောင်နှံတွေ ဘ၀ဆက်တိုင်း အတူတူဆုံနိုင်မယ့် ကုသိုလ် ဘ၀တိုင်း ဆုံချင်လျှင် အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ဘဂ္ဂတိုင်း သုသုမာရဂိရိမြို့တွင် သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် နကုလပိတာ နကုလမာတာ အမည်ရှိသော သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံအိမ်သို့ ကြွတော်မူသည်၊ သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံတို့သည် မြတ်စွာဘုရားအား ရိုသေစွာရှိခိုးလျက် သင့်လျော်သောနေရာ၌ ထိုင်နေကြပြီးလျှင် နကုလပိတာ သူကြွယ်က […]
သတိပြုဖွယ် စိတ်ကျရောဂါမဖြစ်ခင်မှာဖြစ်လာတတ်တဲ့ ရှေ့ပြေးခံစားချက် (၄) မျိုး
သတိပြုဖွယ် စိတ်ကျရောဂါမဖြစ်ခင်မှာဖြစ်လာတတ်တဲ့ ရှေ့ပြေးခံစားချက် (၄) မျိုး စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ တခြားလူတွေနဲ့ဘာမှကွဲပြားခြားနားနေမှာမဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်လုပ်စရာအလုပ်တွေကို ဟန်မပျက်လုပ်နေနိုင်ပြီး ပုံမှန်လှုပ်ရှားသွားလာနေနိုင်ပြီး သာမန်လူတစ်ယောက်လိုပဲဖြစ်နေတာပါ။ တချို့ဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်လို့ မသိဘဲ တခြားခံစားချက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ ထင်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ စိတ်ကျရောဂါမဖြစ်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါဖြစ်လာတတ်တဲ့ ကနဦးခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် …။ (၁) ကိုယ့်ဆန္ဒကို […]
မိန်းကလေးတွေကို ယေက်ျားလေးများ စွန့်ခွာသွားရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း (7) ခု
မိန်းကလေးတွေကို ယေက်ျားလေးများ စွန့်ခွာသွားရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း (7) ခု သင့်မှာ လှပထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး မိန်းကလေးချင်းတောင်အားကျရတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိူးရှိပါလိမ့်မယ်။သူမအနေနဲ့ အချစ်ရေးအဆင်မပြေတာမျိူး၊အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အဆင်မပြေတာမျိူးကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့အခါ သင်အံ့သြမိပါလိမ့်မယ်။အရာရာပြည့်စုံသော်လည်း သူ့ကောင်လေးနဲ့သူဘာလို့အဆင်မပြေရပါလိမ့်။ယောက်ျားလေးတွေရင်ဖွင့်ထားတဲ့ သူတို့ချစ်သူကောင်မလေးများအပေါ် စိတ်ပျက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်နော် … (၁) အမြဲစိတ်ညစ်နေတတ်သော မိန်းကလေး မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုရဲ့ ကာဗာမှာ ရုပ်တည်တည်နဲ့ […]
အတုယူမှားနေကြပီ…အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တနေ့ကို ၁၀ကားလောက် နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတယ်
အတုယူမှားနေကြပီ…အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တနေ့ကို ၁၀ကားလောက် နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတယ် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြန်မာစုံတွဲ ခိုးရိုက်တွေ၊ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တစ်နေ့ကို ၁၀ကားလောက် နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတယ်။ အဲဒီကာယကံရှင် တွေရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက် အဲဒီကားတွေ မြင်တွေ့နေကြရမှာပါ …။ တချိန်မှာ ငါ့အဖေတွေ ငါ့အမေတွေဆိုပြီး သူတို့သားသမီးတွေလည်းမြင်နေကြ ရမှာဆိုတော့ တွေးကြည့်ရင် […]
အမျိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေးနှင့် ဓမ္မတာလာချိန် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ
အမျိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေးနှင့် ဓမ္မတာလာချိန် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေထဲ ဓမ္မတာဖြစ်စဉ်လည်းတစ်ခုအပါအဝင်ပါ။ ဓမ္မတာလာခြင်း၊မလာခြင်းက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာပြောနိုင်ဖို့ အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မတာဖြစ်စဉ်က အရမ်းအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လို့ အမျိုးသမီးတိုင်းသိထားရမယ့် ဓမ္မတာလာနေစဉ်ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်များကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…. “ဆောင်ရန်” (1) နားနားနေနေ နေပါ ဓမ္မတာလာနေစဉ်မှာ အားနည်းနေတာ၊ ဗိုက်အောင့်တာတွေဖြစ်နေတတ်ပြီး နေမကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေတတ်တာကြောင့် ပင်ပန်းတာတွေမလုပ်ဘဲ တတ်နိုင်သလောက် […]
တစ်စုံတစ်ဦးက သင့်အကြောင်းစဉ်းစားနေရင် ခံစားရမယ့် ထူးဆန်းတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာများ…
တစ်စုံတစ်ဦးက သင့်အကြောင်းစဉ်းစားနေရင် ခံစားရမယ့် ထူးဆန်းတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာများ… တစ်ယောက်ယောက်က သင့်အကြောင်း တွေးနေတာကို သိနိုင်မယ်ထင်လား? သိရောသိချင်လား? ခုပြောပြမယ့်အချက်တွေက သင့်အကြောင်းကိုတစ်ယောက်ယောက်ကတွေးနေတဲ့အခါ သင့်မှာခံစားနေရမယ့် လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ် …။ သင့်အကြောင်းတွေးတယ်ဆိုတာမှာ သင့်ကိုချစ်လို့ဖြစ်စေ မုန်းလို့ဖြစ်စေ တွေးနေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်ကိုရန်ပြုဖို့ထိ တွေးနေတယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကိုသိထားတော့ သင်သတိထားနိုင်တာပေါ့။ ကဲ..ဘယ်လိုတွေခံစားရမလဲ ဘာတွေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်… […]
လူဖြစ်ရှုံးကြသူများ…ဘယ်လိုလူတွေက လူဖြစ်ရှုံးလဲဆိုတာ ဖက်ကြည့်ရအောင်
လူဖြစ်ရှုံးကြသူများ…ဘယ်လိုလူတွေက လူဖြစ်ရှုံးလဲဆိုတာ ဖက်ကြည့်ရအောင် ” လူဖြစ်ရှုံးကြသူများ ” (၁) လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို ကွယ်ရာမှာ အုပ်စုလိုက် အတင်းတုပ်ပြီး အပုပ်ချ အကြောင်းမ ရှိအကြောင်း ရှာ နှိမ့်ချ ပြောတတ်သူ …၊ (၂) သူတပါးပျက်ဆီးရာပျက်ဆီးကြောင်း မဟုတ်မမှန် သတင်းလွှင့် ၊ အတင်းအဖျင်းပြောတတ်သူ […]
ဆံပင်ခဏခဏ ကျွတ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေကြတဲ့သူတွေ အတွက်
ဆံပင်ခဏခဏ ကျွတ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေကြတဲ့သူတွေ အတွက် ဆံပင်ကျွတ်တာဟာ မိန်းကလေးတိုင်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူတိုင်းမကြုံတွေ့ချင်ဆုံး ပြဿနာတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး …။ ဆံပင်ခဏခဏ ကျွတ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေကြတဲ့သူတွေ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို မကြာခဏမေးနေသူတွေအတွက် ဒီတခါမှာတော့ သဘာဝကပေးတဲ့ အဖြေကို မျှဝေပေးသွားပါမယ်နော် …။ ကြက်သွန်နီနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ဘာမှခက်ခက်ခဲခဲ […]
သင် (သို့) သင့်ချစ်သူ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင်
သင် (သို့) သင့်ချစ်သူ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင် နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့်အတွင်းစိတ် သဘောထားကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ် …။ ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ […]